दिदीको दुःख देखेर बिचरी बहिनीले भिनाजुको गर्भ बोकेपछि… - Kavre Online
दिदीको दुःख देखेर बिचरी बहिनीले भिनाजुको गर्भ बोकेपछि…
दक्षिणपूर्वी लण्डनका ३१ वर्षकी सिवोन र उनका ५१ वर्षे पती डीनले अब फेरि आमा बाबु बन्ने इन्छा म’रिसकेका थिए । सिवोनले आफैंउपचारमा समेत ध्यान दिन छाडेकी थिइन् । तर, उपचार नगर्ने हो भने दिदीको ज्यान जाने खबर सुनेपछि एली फेयरफाक्स आफ्नो गर्भ स्वयंमसेवाका रुपमा लगाउन हिचकिचाइनन् । ‘एलीले मलाई अंगालो हालिन् र सहजै भनि् कि तिम्रो लागि म बच्चा जन्माइदिन्छु’ आफ्नो लागि बहिनीले गरेको त्याग सम्झँदै सिवोनले भनेकी छन् ।
चिकित्सकीय पद्धतिबाट टेरीको वि’र्य प्रयोग गरेर एली गर्भवती भएकी छिन् रउनीहरु परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन हुने दिन गनेर बसेका छन् । एलीले भन्छिन–क्यान्सरविरुद्ध लड्दै गरेको दिदीलाई देख्दा निकैगाह्रो हुन्थ्यो । त्यसमाथि आमा बन्न नसक्ने भन्ने थाहा पाएपछि उहाँ झनै निराश हुनु भो । त्यसैले उनका लागि बच्चा जन्माइदिनु मेरो लागि सहज निर्णय थियो ।
यो पनि: कुखुराको भालेले अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्दा एक महिलाको मृ’त्यु!
दक्षिण अस्ट्रेलियामा आफ्नै घरमा पालेको कुखुराको भालेले आक्रमण गर्दा एक वृद्धा महिलाको मृ’त्यु भएको छ । डेली मेलको अनुसार आफ्नै घर पछाडि ती महिलाले सानो खोरमा कुखुरा पालन गरेकी थिइन्। महिला कुखुराको अन्डा संकलन गर्नको लागि खोर गएको बेला त्यहाँ भएको भालेले महिलालाई अन्धाधुन्ध आ’क्रमण गरेको हो ।
भालेको आक्रमणबाट वृद्धाको शरीरबाट अत्याधिक रगत बगेपछि उनको निधन भएको प्रहरीले जनाएका छन्। यद्यपि मृ’त्यु हुने महिलाको नाम र उमेर भने उनको परिवारलाई थप आघात हुने भन्दै खुलाइएको छैन ।कुखुराहरु प्राय अहिंस्रक मानिन्छन् । भालेचाँही कहिलेकाँही आक्रमक हुने गर्दछ। प्रहरीले यस घटना अनौठो भएको बताएको छ। एडिलेड युनिभर्सिटीका फोरेंसिक विज्ञ प्रोफेसर रोजर ब्यायार्डले यस्तो घटना एकदम कमै पाइने बताइन् ।
जनावरको कारण हुने मृत्युबारे प्रोफेसर ब्यायार्डले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । उनको अध्ययनले डाक्टरलाई पोस्टमार्टम गर्न सहयोग पुर्‍याउने र लुकेका ख’तराहरू सम्बन्धी मानिसहरूलाई चेतावनी दिने आपेक्ष गरिएको छ ।
423 Post Views
Prevरादिकाको श्रीमान भित्री प्रमाण सहित मिडियामा, सबै झुट भन्दै आक्रोस पोखे बास्तविकता यस्तो (भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextरविन्द्र अधिकारीको विरासत सम्हाल्न श्रीमती, वाईडबडि भ्रष्टाचार बारे यस्तो भनाई (भिडियो)
ज्याति मगरले मुख छाडेको स्टाटसमा करिश्माको समर्थन
महानायक राजेश हमाल बाल्यकाल सम्झिँदै
लामखुट्टे मा’र्न गन बोकेर बस्तीमा सांसद निस्किएपछि ….. !
रबि आज निस्कने भएपछि उनको नाममा सडकमा समर्थकले गाए मन रूहाउने गीत,चल्यो रुवाबासी